News - tingcha diski & egweri wiil
Tingcha diski & egweri wiil
A: Akụrụngwa nke ịchapu diski:
Cha discs nwere ike kere abụọ dị iche iche: resin ọnwụ diski na diamond ọnwụ diski. Enwere ike iji ya mee ihe maka ịkpụ ngwaahịa nchara nkịtị, igwe anaghị agba nchara & ihe ndị na-abụghị ọla. ịhapụ ígwè na sọlfọ na ihe ndị ọzọ na-akpata mmiri ọgwụ iji rụọ ọrụ nke ọma. Ya mere, enwere diski mpempe akwụkwọ pụrụ iche maka ụlọ ọrụ ike nuklia, ha nwekwara ike iji ya rụọ ọrụ dị iche iche nke carbon steel, igwe anaghị agba nchara, alloy steel, iron cast and other metals:
A: Akụkụ nke ịcha diskis
A na-eji abrasives, ndị na-eme ka ndị na-eme ka ihe nkedo yie ihe ndị a na-ejikarị ihe ndị dị ka abrasive, size urughuru, bonding agent, ekweghị ekwe, udi na size. N'ime ha, a na-ejikarị abrasive ahụ eme ihe dị ka alumina oxide ma ọ bụ diamond, ọ bụ naanị akụkụ abrasive bụ n'ezie na-egbutu ma na-egweri!
C: Cutcha & egweri diski nkọwa
Nkọwa zuru ezu nke ịkụcha diski na diski na-egweri abụghị ihe dị iche. N'ihi ụzọ ngwa ha dị iche iche, diski egweri dị obere, nke mere na ọ ga-adịgide adịgide karị n'okpuru ọnọdụ ọrụ ọrụ, mana a na-eji diski iji belata oge iji belata oge na enweghị ike iji ya dị ka diski egweri, belụsọ ma emechara igwe ahụ ya na igbutu ya ma na egweri ya, n’agbanyeghi omume obula nke n’esoghi imewe ihe eji eme ya bu ihe di egwu.
DAtụmatụ nke ịcha diski
Resin ọnwụ diski dị mfe ịkwụsị, ikekwe bibie workpiece ma ọ bụ ọbụna mee ndị ọrụ na-afụ ụfụ, ya mere mush nwere nchekwa mkpuchi mgbe ịcha.
A na-emepụta diski alloy TAA alloy site na brazing. N'ọnọdụ ụfọdụ, a oyi akwa nke diamond na-ike ịgbado ọkụ na metal mkpụrụ mgbe a metal solder agbaze usoro. Typedị ngwaahịa a nwere njirimara nke arụmọrụ dị elu, ndụ ogologo ndụ, nchekwa, nchekwa gburugburu ebe obibi na enweghị mmetọ.Mainly dochie ugbu a resin bond corundum cutting diski, electroplated cut diski, na ụfọdụ ọkụ-enwe sintered cut diski. O kwesiri ka igbutu okpokoro gburugburu, ogwe osisi, ogwe igwe, ogwe osisi, ogwe mmiri, ihe ntanye, na profaịlụ igwe ndi ozo, tinyere "nkenke nkedo nkedo", ihe nkedo esere esere na ihe ndi ozo.
Ntụkọ n'etiti resin diski na diamond alloy discs: